Aaminaad indho la’aan ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Subaxaan waxaan istaagay muraayadda horteeda waxaanan weydiiyay su’aasha: muraayadda, muraayadda derbiga ka soo muuqanaya, waa kuma kan ugu quruxda badan waddanka oo dhan? Markaas muraayadda ayaa igu tidhi: fadlan ma iska dhaafi kartaa?
Waxaan ku weydiinayaa su’aal: «Ma aaminsanahay waxaad aragtay ama si indho la’aan ah ayaad u aamineysaa? Maanta waxaan si dhow u eegaynaa iimaanka. Waxaan rabaa inaan sameeyo hal xaqiiqo oo cadeeya: Ilaah wuu nool yahay, wuu jiraa, rumeeyaa mise maya! Eebbe kuma tiirsanaan aaminaadaada. Noloshu ሕይወት kuma timaado markii aan u yeerno dadka oo dhan inay rumeeyaan. Isaguba sidoo kale isagu ma noqon doono Ilaah haddii aanan dooneynin inaan wax ka ogaano isaga!
Waa maxay aaminaadu?
Waxaan ku noolnahay laba soone: Waqti kale, waxaan ku noolahay adduun aragtida jirka lagu arki karo, oo la barbar dhigi karo aag goos goos ah. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ku nool nahay duni aan la arki karin, aag daa'im ah iyo janno.
"Laakiin iimaanku waa kalsooni adag waxa aad rajaynayso iyo shaki la'aan wixii aydaan arkin" (Cibraaniyada 11,1).
Maxaad aragtaa markaad muraayadda eegto? U arag jirkaaga si tartiib tartiib ah. Ma aragtaa laalaab, laabati ama timo jiifa saxanka? Miyaad u aragtaa naftaada sidii qof dembi leh oo xumaan oo dhan galay iyo dembiyadiisa oo dhan? Mise waxaad aragtaa weji ka buuxa farxad, rajo iyo kalsooni?
Markii Ciise u dhintay iskutallaabta dusheeda, dembiyadaada, wuxuu u dhintay dembiyada binu aadmiga oo dhan. Allabari Ciisena waxaa lagaa sii daayay ciqaabtaada iyo xagga Ciise Masiix waxaad ku heshay nolol cusub. Waxay ku dhasheen kor xagga sare ee xoogga Ruuxa Quduuska ah inay nolol buuxda ku noolaadaan cabbir cusub oo xagga ruuxa ah.
Haddii hadda laydinla soo sara kiciyey Masiix, doondoona waxa korka yaal, meesha Masiixu joogo, isagoo fadhiya midigta Ilaah. Raadso waxa sare, ma aha waxa dhulka jooga. Maxaa yeelay, waad dhimatay, oo noloshiinnuna Masiixay kula qarsoon tahay Ilaah. Laakiin haddii Masiixa oo ah noloshiinnii la muujiyo, markaasaad idinkuna ammaan kula soo muuqan doontaan. (Kolosay 3,1: 4).
Waxaan kula nool nahay Masiixa boqortooyadiisa jannada. Islaantii hore ayaa dhimatay oo is cusub ayaa nolosha timid. Hadda waxaan nahay abuur cusub oo Masiixa ku jira. Waa maxay macnaha in lagu noqdo “abuur cusub oo Masiixa ku jira?” Waxaad nolol cusub ku leedihiin Masiixa. Adiga iyo ciise waa mid. Mar labaad Masiixu kalama noqon doontid. Naftaadu waxay ku qarsoon tahay Masiixa xagga Ilaah. Iyaga waxaa lagu aqoonsaday Masiixa ilaa iyo dhexdaba. Noloshaadu way ku jirtaa. Isagu waa noloshaada. Kaliya ma tihid inaad tahay degganeyaasha dunidan ee dunidan ku nool, laakiin sidoo kale degganeyaasha samada. Ma u malaynaysaa sidaas?
Waa maxay indhahaagu inay gartaan?
Hadda oo aad noqotay abuur cusub, waxaad u baahan tahay ruuxa xigmadda:
"Sidaas darteed, markaan maqlo aaminsanaantaada Rabbi Ciise iyo jacaylkaaga aad u qabtid quduusiinta oo dhan, kuma joojin doono inaan ku mahadnaqo oo aan kugu xusuusiyo ducadayda" (Efesos 1,15: 17).
Bawlos muxuu u baryayaa? Xaaladaha kale ee nolosha, bogsashada, shaqada? No! "In Ilaaha Rabbigeenna Ciise Masiix, oo ah Aabbaha ammaanta, uu ku siiyo Ruuxa xigmadda iyo muujinta si aad isaga u aqoonsataan".
Muxuu Eebbe ku siiyay ruuxa xigmadda iyo muujinta? Maadamaad ahayd qof indhoole ahaan jiray, Ilaah wuxuu ku siinayaa indho cusub si aad u aqoonsan karto Ilaah.
Wuxuu ku siin doonaa indhaha nuurka leh ee qalbiga si aad u aragto waxa rajo ah oo uu kuuugu yeedhay, immisa hodan sharaftiisu dhaxalka u leedahay quduusiinta (Efesos 1,18).
Indhahan cusub waxay ku tusinayaan rajooyinkaaga yaabka leh iyo ammaanta dhaxalkaaga ee laydiinku yeedhay.
Xooggiisa itaalkiisu waa intee inagu dhexjiraa, oo aan rumeysanahay saameynta xooggiisa (Efesos 1,19).
Indhahaaga ruuxiga ah waad ku arki kartaa inaad wax walba ku sameyn karto qofka awooda kuu yeelaya, Ciise Masiix!
Isaga, xooggiisa xoogga badan, wuxuu ku shaqeeyey Masiixa markii uu ka soo sarakiciyay kuwii dhintay oo uu ugaga adeegsaday gacantiisa midig jannada dhammaan boqortooyooyinka, xoogga, xoogga, xukunka iyo magac kasta oo loogu yeedho, oo aan ku jirin midkan oo keliya. Adduun laakiin sidoo kale mustaqbalka » (Efesos 1,20: 21).
Ciisena waxaa la siiyay xoog iyo sharaf dhan boqortooyooyinka oo dhan, xoog, xoog iyo xukun. Magaca Ciise waad ku wadaagi kartaan.
«Oo wuxuu sameeyey wax walba cagihiisa hoostiisa wuxuuna ka dhigay madaxa bulshada kan ka sarreeya wax kasta oo jidhkiisa ah, oo ah buuxinta kuwa wax walba oo wax walba ku fuliya» (Efesos 1,22: 23).
Taasi waa nuxurka rumaysadka. Haddii aad arki karto xaqiiqada cusub ee qofka aad ku jirtid Masiixa, waxay beddeshaa fikirkaaga oo dhan. Wixii aad la kulantay iyo sidoo kale haddaba waxaad ku siineysaa duruufahaaga nololeed ee hadda macno cusub, cabbir cusub. Ciise wuxuu buuxiyaa noloshaada oo dhan.
Tusaalahayga shakhsi ahaaneed:
Waxa jira duruufo nololeed iyo dad noloshayda ah kuwaas oo shucuur ahaan i dumiya. Ka dib waxaan aadaa meesha aan ugu jeclahay, anigoo aamusnaan la hadlaya aabahayga ruuxiga ah iyo Ciise. Waxaan u sharaxaa sida ay u faaruq tahay waxaan dareemayo iyo sida aan ugu qanacsanahay inuu iga buuxiyo dhamaan jiritaankiisa.
«Taasina waa sababta aannaan u daalin; laakiin haddii ninkeenna dibadda ahu uu maansado, waxa gudaha xaggiisa ka soo cusboonaaday maalinba maalinta ka dambaysa. Sababtoo ah dhibaatadeena, oo ah mid ku meel gaadh ah iyo iftiin, waxay abuurtaa sharaf weligeed iyo welwel badan, innaga, oo aynaan ku arkin wixii la arki karo, laakiin aan la arki karin. Maxaa yeelay waxa muuqda waa ku meel gaadh; laakiin waxa aan la arki karin waa weligiis (2 Korintos 4,16: 18).
Waxaad ku leedahay nolosha Ciise Masiix. Isagu waa noloshaada. Isagu waa madaxaaga adiguna waxaad tahay qayb ka mid ah jidhkiisa ruuxiga ah. Dhibaatadaada maanta iyo arrimahaaga noloshaada waxay kuu abuurayaan sharaf culus weligeed.
Markaad mar labaad hor taagan tahay muraayadda, ha eegin bannaankaaga, wixii la arki karo, laakiin wixii aan la arki karin ee weligiis jira!